Arati Lohorung: फोटो खिच्ने क्रममा
Posted by Arati at 10:29 AM
Aakar December 4, 2008 at 3:38 PM
फोटो यहाँ पनि राखिएको भए, राम्रो हुनेथियो कि ?
Dilip Acharya December 4, 2008 at 6:53 PM
आकार जी ले भने जस्तै फोटो यहा राख्‍नु भयो भने तीनले नहेरे नि कोहि परिचितले हेर्ने सक्छन नी !
(नभए हामी त पक्कै हेर्छौ)
Basanta December 5, 2008 at 6:55 AM
आकार र दिलिप दाइको कुरो सही हो। यहाँ राख्दा अरु केहि नभएपनि हामीले त ती मायालु आमैको अनुहार हेर्न पाउनेथियौं।
फेरि इण्टरनेटको दुनियाँ हो, के थाहा यो ब्लगमा राखिएको फोटोकै कारणले उनीसंग भेट हुनपनि सक्छ।
कैलाश December 16, 2008 at 8:12 PM
कुरा त सबै साथीहरुको सही हो है आरतीजी। कि अब कुनै विशेष कारण भए त के भन्नु र हैन। नत्र त मेरो पनि सहमति छ नि।
ThE KiRaT December 18, 2008 at 4:09 PM
तपाईं को रुची धेरै नै राम्रो छ। कुर रह्यो तस्बिर को, पकै पनि थ्यो पनि राम्रो नै छ होला। तपाईं को ब्लग को अन्य तस्बिर हरु जस्ताइ।
Med Chem December 23, 2008 at 9:13 PM
सबैले भनेको कुरा मलाई पानी सही लाग्यो. ब्लॉग माँ फोटो राख्नु भयो भने हामीले पानी हेर्न पौने थियौ. साथै वहा का आफन्त ले पानी हेर्न सक्नुहुंच
And if you want some refreshment plz dont forget to my blog.
Glad to have some suggestions and feedback.
Med Chem January 16, 2009 at 10:08 PM
arati ji nice to see the pic ..hope someday she will get her pic.